Iinqwelo-moya zaseMelika ukuya kwikhowudi kunye ne-IndiGo kwiindiza zaseIndiya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo-moya zaseMelika ukuya kwikhowudi kunye ne-IndiGo kwiindiza zaseIndiya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-American Airlines iphehlelela inkonzo entsha phakathi kweNew York City kunye ne-India ikomkhulu le-Delhi kwinyanga ezayo, naphakathi kweSeattle, WA kunye nesixeko sase-Bengaluru ekuqaleni konyaka olandelayo.
Inqwelo moya enkulu yaseIndiya ibhengeza isivumelwano sokwabelana ngekhowudi kunye neenqwelo moya zaseMelika kwiindlela zasekhaya.
Ukwabelana ngeKhowudi kuvumela inqwelomoya ukuba ithengise izihlalo kwinqwelomoya esebenza liqabane layo, ukuze ibhabhe abakhweli iye kwiindawo ezingasebenziyo.
I-American Airlines iphehlelela inkonzo entsha phakathi kweNew York kunye ne-India ikomkhulu lase-Delhi kwinyanga ezayo.
Njengokuba iAmerican Airlines ilungiselela ukwazisa ngenkonzo entsha phakathi kweUSA neIndiya, yabhengeza isivumelwano sokwabelana ngeekhowudi nomphathi omkhulu waseIndiya iIndiGo.
Isivumelwano sokubambisana, esichazwe namhlanje, kulindeleke ukuba siqale ngo-Okthobha, kwaye siza kubona American Airlines'ikhowudi kwiindlela ezingama-29 ze-IndiGo zasekhaya eIndiya.
Isivumelwano sokwabelana ngeekhowudi sivumela abathwali bomoya ukuba bathengise izihlalo kwiinqwelomoya eziqhutywa ziinqwelomoya zabo, ukuze babhabhe abakhweli babo baye kwiindawo abangazikhonziyo.
Idilesi yokwabelana ngekhowudi ijongene nayo IndigoYeyona moya inkulu yaseIndiya ngenani labakhweli elithweleweyo, neliphethwe yiInterGlobe Aviation, ifuna ukwamkelwa ngabasemagunyeni kurhulumente waseMelika nowaseIndiya, utshilo uMbutho weeMoto zaseMelika.
American Airlines, Inc.yinqwelomoya enkulu yaseMelika izinze eFort Worth, eTexas, ngaphakathi kweDallas-Fort Worth metroplex. Yeyona moya inkulu ehlabathini xa ilinganiswa ngokobungakanani bezithuthi, abakhweli abacwangcisiweyo bayathwalwa, kunye nengeniso yabakhweli kwimayile.
Indigo Inqwelomoya yenqwelomoya enexabiso eliphantsi ezinze eGurgaon, Haryana, India. Yeyona moya inkulu eIndiya ngabakhweli abathwalwayo kunye nobungakanani beenqanawa, nge 59.24% yesabelo sentengiso sasekhaya ukusukela ngeAgasti 2020.